Candy · Janoary 2012 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Janoary, 2012
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Janoary, 2012
Dika24 Janoary 2012
Tamin'ny fotoana nankalazàna ny Andro Eran-tany Ho An'ny SIDA (Novambra –Desambra, 2011) dia nisy fampirantiana ny sary avy tamin'ny tetikasa “AIDS- Open Faces” natao tao amin'ny tranoheva ‘Lavra’ tao Kiev. Ny fampirantiana dia natokana manontolo ho an'ireo olona mitondra ny VIH/SIDA ary nokarakarain'ny Elena Pinchuk AINTIAIDS Foundation. fikambanana mpanao asa...
Fitaovam-pifaneraseràna: Ny Fitendry Virtoaly & Ny “Translittération”
Mediam-bahoaka24 Janoary 2012
Eritrereto hoe manoratra "script" tsy nifototra amin'ny teny Latina ianao ary miraikitra eo amin'ny trano kely iray ahafahana mampiasa aterineto amina seranam-piaramanidina any ivelany, sady miezaka ny maka sary an-tsaina ny fomba handefasana hafatra amin'ny fiteninao. Mety ny PC ampiasainao mihitsy no manana karazana fitendry hafa nohon'ny "qwerty" ary tsy...
Okraina: Miditra Amin'ny Fanangonam-bola sy Fanentanana Amin'ny Alàlan'ny Aterineto
Mediam-bahoaka01 Janoary 2012
Ny Elena Pinchuk AINTIAIDS Foundation ao Okraina dia nitondra hevitra feno famoronana mba hanentanana ny fahatsapan-tenan'ny fiaraha-monina Okrainiana amin'ny raharaha mikasika ny VIH/SIDA, toy ny fampitomboana ny fanampiana ny olona miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA. Ireto hetsika fanasoavana feno famoronana ireto dia tena mifototra amin'ny aterineto ary misy fiaraha-miombon'antoka amin'ny sampan-draharaha...